Dilan 1990 - YTV
Home » Programs » International Movie » Dilan 1990
Daily Show, International Movie, Programs September 6, 2020 12:10 am
? ငယ်ရွယ်သူတွေကြား ချစ်သူနှစ်ယောက်ထားတာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်နေတုန်းဆိုရင်တော့ ဒီအချစ် ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်……
? ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ကတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ရဲ့ ရိုဆန်ဆန် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ချစ်သူရှိရက်နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အခါ လူငယ်ပီပီ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေအတိုင်း ဒေါသတွေနဲ့ဘဲဖြေရှင်းသွားမလား….?
❓ ဒါမှမဟုတ် အားလုံးမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ရှုထောင့်အဖြစ် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဘယ်လိုမျိုး ဖြေရှင်းသွားကြမလဲ….? ဆိုတာကိုတော့ YTV Channel ကနေ ဒီဒရာမာ အချစ်ဇာတ်ကားလေးကို ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတဲ့အခါ ဆက်ဆက် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်………
? ပြသမည့်ရက် : ၆ – ၉ – ၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေ)
⏰ ပြသမည့်အချိန် : ည (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ်
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : ၇ – ၉ – ၂၀၂၀ (တနင်္လာ)
⏰ ပြန်လည် ပြသမည့်အချိန် : နေ့လည် (၁) နာရီ
Daily Show (121)
International Movie (43)
International Series (17)
Y Music (3)
Series Promo (8)
နှလုံးသားကစားပွဲ အပိုင်း (၂၂)
The Lion Guard အပိုင်း (၆၃)
ဓားလောကရဲ့သူရဲကောင်း အပိုင်း (၂၆)
YTV Channel သည် DVB –T2 စနစ်ဖြင့် လေလှိုင်းတွင် အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်မည့် တီဗီရုပ်သံလိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ပူးပေါင်းသဘောတူညီမှုကိုလည်း ၂၀၁၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့ကရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ် - ၈၈၆/၈၈၈, ပြည်လမ်း, ၉မိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
09 - 457741487
YPromo YMusic YGame YInfo YEvent YMovie Myanmar Movie Foreign Movie YSeries Myanmar Series Foreign Series
Copyright © 2018 - all rights reserved by YTV